I-OTT Technology Ithatha Kanjani I-TV Yakho | Martech Zone
Uma wake wazitika ngokweqile ubuke uchungechunge lwe-TV ku-Hulu noma ubuke i-movie kuNetflix, usuke wayisebenzisa Ngaphezulu okuqukethwe futhi kungenzeka ukuthi akukwazanga lokho. Imvamisa ibizwa ngokuthi Ott emiphakathini yokusakaza nobuchwepheshe, lolu hlobo lokuqukethwe lucindezela abahlinzeki bendabuko be-TV TV futhi lisebenzisa i-Intanethi njengemoto ukusakaza okuqukethwe njengesiqephu sakamuva se- Isihambi Izinto noma endlini yami, kunjalo Downton Abbey.
Ubuchwepheshe be-OTT abugcini nje ngokuvumela ababukeli babuke imibukiso nama-movie ngokuchofoza inkinobho nje, kodwa futhi kubanika nenkululeko yokwenza lokho ngokwemibandela yabo kakhulu kakhulu lapho befuna. Cabanga nje ngakho okwesikhashana. Kukangaki esikhathini esedlule lapho bekufanele ukhothamele khona izinhlelo ngoba bekungekho ndlela obuzophuthelwa ngayo isiphetho sesizini sohlelo lwakho oluyintandokazi lwe-TV?
Impendulo kungenzeka ukuthi ngaphambi kokuthi kwethulwe ama-VCR nama-DVR - engizama ukukusho ukuthi indlela esidla ngayo abezindaba isishintshe kakhulu. Ubuchwepheshe be-OTT bukhululile imikhawulo phakathi kwabahlinzeki bokuqukethwe nabasebenzisi ngenkathi kunikeza abathengi ukufinyelela ezinhlelweni zokuzijabulisa abalindele kumafilimu amakhulu nama-studio e-TV. Futhi, ngabe ngishilo ukuthi kumahhala kakhulu kwezentengiselwano?
Ngaphambi kokwethulwa kokuqukethwe kwe-OTT - ireferensi yokuqala eyaziwayo yaleli gama yayisencwadini ka-2008 Isingeniso Sezinjini Zokusesha Ividiyo nguDavid C. Ribbon noZhu Liu, imikhuba yezibukeli ye-TV iye yahlala ingaguquguquki eminyakeni edlule. Kafushane nje, uthenge ithelevishini, wakhokhela inkampani yezintambo ukufinyelela inqwaba yeziteshi, ne-voila, ubenomthombo wokuzijabulisa kusihlwa. Kodwa-ke, izinto zishintshe kakhulu njengoba abathengi abaningi besike intambo kanye nanoma yiziphi izimfuno abazibekelwe izinkampani zentambo. Ngokusho kuka-2017
Ngokusho kwe-2017 Ucwaningo olwenziwe yiLeichtman Research Group, Inc., ama-64% emakhaya ayi-1,211 54 okwaxoxwa nawo athi asebenzisa insiza enjengeNetflix, i-Amazon Prime, iHulu, noma i-video lapho ifunwa. Iphinde yathola ukuthi ama-28% wabaphenduli bathi bavame ukungena kwi-Netflix ekhaya, cishe inani eliphindwe kabili (amaphesenti angama-2011) abake babuya ngonyaka ka-1. Empeleni, kusukela ngo-Q2017 XNUMX, INetflix ibinababhalisi bokusakaza abayizigidi ezingama-98.75 emhlabeni wonke. (Nakhu okupholile ishadi kukhombisa indlela eya ekubuseni komhlaba.)
Futhi ngenkathi i-OTT ibone ukukhula okukhulu ekuthandweni kwemindeni emhlabeni wonke, indawo eyodwa ikakhulukazi engiyibonile lapho isanda kuthola khona amandla amakhulu ngaphakathi komphakathi webhizinisi. Ngonyaka odlule noma ngaphezulu, ngibone izinhlangano eziningi zisebenzisa ubuchwepheshe be-OTT njengendlela yokubonisa imininingwane yazo noma yokufinyelela komunye umuntu ngesikhashana. Lokhu kusebenza kubaluleke kakhulu kubaphathi abamatasa abadinga imininingwane esesikhathini kakhulu noma ngabe bakuphi ngaleso sikhathi.
Isibonelo esisodwa esivelele I-C-Suite TV, edlala umdlalo wami we-TV I-C-Suite noJeffrey Hayzlett. Ngasekuqaleni konyaka, lesi siteshi sebhizinisi ebesifunwa kakhulu sakha ubudlelwano naso ReachMeTV, "inethiwekhi yezokuzijabulisa yeziteshi eziningi kanye neplatifomu yokusabalalisa yomhlaba," ukusakaza umbukiso wami kumathelevishini ezikhumulweni zezindiza ezinkulu ezingama-50 e-United States nakumahhotela angaphezu kwesigidi esisodwa ezweni lonke. Kuyathokozisa ukubona uhlelo lwami luza ukubonakala okwengeziwe, ikakhulukazi ngezithameli engifuna ukufinyelela kuzo.
Ngokubona kwami, izikhumulo zezindiza namahhotela ngokungenakuphikiswa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu zokubamba ukunakwa okungahlukanisiwe kwabahambi bebhizinisi abavame ukuthola ukuthi isikhathi sabo sokuphumula kuphela phakathi nesikhathi sisalinde ukubamba indiza noma ukuphumula endaweni yokwamukela izivakashi ehhotela (thatha komunye umuntu okwazi kahle lokhu).
Phambilini, uma umphathi webhizinisi efuna ukubuka noma yimiphi imibukiso yebhizinisi, bekufanele ayenze "ngendlela yakudala" yokuyibuka ngesikhathi esithile. Kepha ngokwethulwa kobuchwepheshe be-OTT, bangafinyelela ezinhlelweni ezihlangabezana nezintshisekelo zabo kumugqa wesikhathi wabo.
Nginesiqiniseko sokuthi ubuchwepheshe be-OTT buzoqhubeka bukhule buze bube nekusasa kuphela njengoba siba umphakathi othuthuke ngokwengeziwe. Lokhu kukhula kuzokwenza amabhizinisi nabathengi ngokufanayo bakwazi ukuxhumana ngezinga lomhlaba wonke ngaphandle kwezingqinamba esabelwe abahlinzeki bekhebula isikhathi eside kakhulu. Njengoba isidingo sokufinyelela ngokushesha kohlelo lokuzijabulisa nolwezemfundo lukhula, kuzoba mnandi ukubona ukuthi ubuchwepheshe be-OTT busizosisa kude kangakanani. Angazi ngawe, kepha ngizobe ngilungisa ukuze ngithole.
Tags: amazon primeI-C-Suite TVI-C-Suite noJeffrey HayzlettHuluiqembu le-leichtman researchNetflixottNgaphezuluReachMeTVividiyo ekufunweni